Erciyes, Qiimaha Aduunka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriErciyes, Qiimaha Dunida
08 / 08 / 2019 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TURKEY, TELPHER
erciyes qiimo adduunka
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu ku qabtay kulan muhiim ah Erciyes. Madaxweynaha Büyükkılıç wuxuu la kulmay maalgashadayaasha Erciyes, oo ah dhulka loo qoondeeyay maalgashadayaasha sida ugu dhaqsaha badan si ay xarumaha u rabaan. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu cadeeyay in Erciyes uu yahay qiimo kaliya ee aan dalkeena aheyn, laakiin aduunka oo dhan, iyo inay ka shaqeynayaan sidii ay qiimahaan ugu soo bandhigi lahaayeen adeega aadanaha sida ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Duqa Magaalada Caasimadda Memduh Büyükkılıç wuxuu la yeeshay maalgashadayaasha si ay u sameeyaan maalgashi qeybta 7 ee loo qoondeeyay 24 sano ka hor. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu qaatay fikradaha dhammaan maalgashadayaasha kulanka.
“QALBIYADU WAA DAAWEYN MUHIIM AH”
Kadib fikrada maal gashadayaasha, Erciyes A.Ş. Gudoomiyaha Gudiga Murat Cahid Cıngı, Erciyes waa hantida ugu muhiimsan ee magaaladan, ayuu yidhi. Erciyes waa qiime isagu laftiisa; Si kastaba ha noqotee, Cıngı wuxuu carabka ku adkeeyay in Madaxweyne Memduh Büyükkılıç uu qabtay shaqooyin muhiim ah alaabada kale ee taageeri doonta Erciyes ee Kayseri wuxuuna yiri, Ourz Madaxweynaheenu wuxuu wadaa mashaariic aad u culus si uu u soo bandhigo dhammaan alaabada dalxiiska ee magaalada si loogu anfaco shacabka. Dooxada Koramaz, Kapuzbaşı Waterfall, Qiimaha tuulada Hürmetçi sida Erciyes wuxuu isku dayayaa inuu mideeyo dalxiiska. Sannadkii hore diyaaradda ayaa timid usbuuc kasta oo ka timaada waddanka 3. Sannadkan, 4-5'e ayaa noqon doona. Horumaradaani waxay ka dhigan yihiin diyaaradaha 10 ka dib sannadihii 30. Seddex jeer tirada dalxiisayaasha ku yimaadda duullimaadyada charter waxay ka yimaadaan Istanbul. Erciyes wuxuu sumad ku leeyahay Russia iyo Ukraine. ”
D WAXAAN KU FILAN YAHAY INAAN KU BIXIYO SHAQADA ”
Duqa Magaalada Caasimadda Memduh Büyükkılıç wuxuu u mahadceliyay dhammaan maalgashadeyaasha ka qeyb qaatay qiimeynta kulanka. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu cadeeyay inay heleen filashooyinka maalgashadayaasha ayna ka jawaabeen astaamaha su’aalaha madaxdooda wuxuuna sheegay inay yeesheen kulan hufan. Isagoo carrabka ku adkeeyay in Erciyes uu yahay qiimo kaliya maahee Kayseri iyo dalkeenna, laakiin sidoo kale adduunka, ayuu Madaxweynaha Memduh Büyükkılıç yiri, de Waxaan sameyneynaa dadaallada lagama maarmaanka ah si aan u soo bandhigno qiimahan sida ugu quruxda badan. Waxaan isku dayeynaa inaan Erciyes u soo qaadno safka hore ee ma ahan kaliya dalxiiska barafka laakiin sidoo kale dalxiiska xagaaga. Waxaan aragnay in maalgashadeyaashayada lagu dhiirigelinayo inay bilaabaan dhismaha xarumaha oo ay muujiyaan rabitaanka bilaabista maalgashiga. Waxaan sameyn doonaa qaybteenna, ”ayuu yiri.
Erciyes waa meel aad u ballaadhan